असफल अर्थतन्त्रको आशा ! | Everest Times UK
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकारका प्रभावशाली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको स्वेतपत्रले मुलुकको आर्थिक अवस्था कतिसम्म निरिह बनिसकेको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै निर्वाचनमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको वाम गठबन्धनका अर्थमन्त्रीले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारले दुई दशक पहिले ल्याएको उदारिकरण र निजीकरणप्रति गम्घीर टिप्पणी गरेका छन् । खतिवडाले कांग्रेसले ल्याएको उदारिकरण र निजीकरण व्यवहारिकता र आश्यकताबाट नभै भद्दा नक्कलका आधारमा गरिएको टिप्पणी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएर असफल भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमार्फत श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थतन्त्रमा देखिएका केही गम्भीर समस्याहरु उजागर गर्दै संसद समक्ष श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
खतिवडाले संसदमार्फत सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा मुलुकको वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह रहेको बताएका छन् । उनले अहिलेको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै अर्थतन्त्र अनौपचारिक रुपमा रुमलिएको बताए ।
खतिवडाले वैदेशिक सहायता आउन कम भएको र रेमिटेन्स समेत कम भएको बताए । उनले स्रोत सुनिश्चितता दिने र अर्को वर्ष स्रोत सुनिश्चितताको बजेट विनियोजन नहुने वित्तिय अराजकता बढेको बताए । उनले बजेट अनुशासन उल्लघंन भएर देशको ढुकुटी रित्तो हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थापित मान्यता विपरीत कर छुट दिने गरेको पाइएको बताए । उनले संघीयता कार्यान्यवयनसँगै सरकारी खर्चको मात्रा बढे पनि त्यसअनुरुप राजश्व बढ्न नसकेको बताए । व्यापार घाटा बढ्दै जानु, रेमिट्यान्स घट्दै जानु, पुनर्निर्माणको काम सुस्त हुनु लगायतका कारण पनि समस्या आएको औंल्याए ।
श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्र्दै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको, विदेशी सहायता कम आएको र सेयरबजारमा समस्या देखिएको बताएका छन् । उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रम र योजना तर्जुमा होडबाजी देखिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभएको र सरकारको साधारण खर्च बढिरहेकाले यसलाई रोक्न श्वेतपत्र ल्याईएको हो । बढ्दो साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मितब्ययिता सम्वन्धी नीति ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि विषयमा अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याईने बताएका छन् । उनले वित्तिय अनुशासनहीनता अन्त्यका लागि बजेट तर्जुमाको समयदेखिनै वित्तिय अनुशासन र मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा पालना गरिने बताए ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय गरिने बताएका छन् । उनले यही क्षेत्रको समन्वयमार्फत फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा निजीकरणको अभ्यास असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसको सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिमा आधारित निजीकरणको अभ्यास विना अध्ययन लहडमा गरिएको उनले बताए । नेपालमा निजीकरणको नीतिलाई पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रवद्र्धन गरेका थिए । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले यो निजीकरणको अभ्यास ‘मूलत असफल’ भएको बताए । उनले निजीकरण भएका संस्थानहरु उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको र यसबाट सेवा उत्पादन र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न पनि नसकेको बताए ।
चुनौतीको चाङ, समाधानका साथ
स्वेतपत्रमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौति पुर्ण र निराशाजनक भएको देखाएका छन । मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति र भविष्य दर्घिकालीन संरचनाकै कारण समस्यामा परेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । श्वेतपत्रमा मुलुकको व्यापार घाटा नियन्त्रण बाहिर रहेका खुलाइएको छ ।
व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ भने राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिती छ । विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो हुनुको साथै बैदेशिक व्यपार घाटाको अवस्थासमेत भयावह भएको बताएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
देशको वर्तमान आर्थिक स्थिती खराव भएको भएपनि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चुनौतीसंगै सम्भावना समेत स्पष्ट पारेका छन् । लामो समयदेखि रहेको नेपालको अस्थिर राजनीतिको अन्त्यसंगै स्थिर सरकार आउनु आर्थिक सुचाकको लागि सकरात्मक संकत भएको बताउछन ।
नागरिकले बाम गठबन्धनका सरकारलाई अनुमोदनकै कारण काम गरेर देखाउने अवसर नया सरकारमा रहेको छ । स्थानियस्तरका बिकासको लागि जनप्रतिनीधीको भूमिकाले देशकै अर्थतन्त्रमा माथि उठ्ने अर्थमन्त्रीको बिश्वास छ । अब युवा शक्ति आइटी, शिक्षा, शिप मुलक कामका लगाउनुको बिकल्प देखिदैन ।
नेपालको आयातमुखी व्यापार रही आएकोले अब पर्यटनको बिकाससंगै बैदेशिक लगानी भित्राउनु कुनै बिकल्प नरहेको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । निजी सहकारी र सरकारी क्षेत्र संगसगै मिलेर अगाडी बढ्नु आवश्यक देखिएको अर्थमन्त्री भनाइ छ । बिगतको सरकारले समेत बित्तिय अनुसासन बिपरीत केही बजेटको दुरुपयोग रगेको भन्दै अब बित्तिय अनुसासनका कडाइ गर्ने श्वेतपत्रको आसय देखिन्छ ।
पूँजी परिचालन उचित रूपमा हुन नसकेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “ठूला आयोजना
निर्धारित समय र लागतमा निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन्, उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रम बढी देखिएका छन् ।”
सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ । रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी संकुचनसँगै थप चुनौती थपिएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताए ।
पूँजी बजार धितोपत्रमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैठकमा शेयर मूल्य प्रभावित भएको र समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको बताए ।
तयारी बिना बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकासका काम गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तीभरणमा धेरै लगानी भएको बताए ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको मूल्य नपाएको भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थानमा तलबभत्ता र अवकाशको रकम दिन बाँकी रहेको जानकारी गराए । विदेशीको नेपालप्रतिको सद्भाव रहेको भन्दै उनले सूचना प्रविधिको विकास गरी आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।